Samsung nalka ay ku yaalliin waxaa loo yaqaan Galaxy SmartTag | Androidsis
Samsung meesha ay ku yaalliin waxaa lagu magacaabaa Galaxy SmartTag
Sida loo qorsheeyay, Samsung waxay soo bandhigtay dhowr saacadood ka hor, xaddiga cusub Galaxy S21, noocyo ka mid ah oo aan horeyba u ogaanay ficil ahaan dhammaan qeexitaankiisa. Isla munaasabadaas, Samsung ayaa sidoo kale soo bandhigtay Galaxy Buds Pro (sameecadaha-baajinaya dhagaha) iyo Galaxy Smart Tag (calaamadaha goobta).
Galaxy SmartTag, wuxuu ku daraa processor-bareeg aad u ballaadhan, oo lagu daro Bluetooth, kaas oo dhammaan nalka ay ku xiran yihiin si loogu duubo goobta ay ku taal cosa kaas oo d la xidhiidhae gebi ahaanba si qarsoodi ah iyada oo loo marayo shabakadda qalabka Samsung. Sidan, haddii aan lumino taas cosa, waa inaan isticmaalnaa taleefankeena casriga ah.
Galaxy SmartTag wuxuu na siinayaa qaab laba jibbaaran oo leh geeso wareegsan iyo god yar oo xagga sare ah taas noo oggolow inaan isku dhejino Balan ama wac taleefanka aaladaha aan had iyo jeer joogno mar walba, gudaha iyo dibaddaba.
Sidoo kale, ku dar badhanka jirka in aan la jaanqaadi karno ficil qalab casri ah gurigeenna. Mahadsanidiin badhan, waxaan shidi karnaa nalalka gurigeenna markii aan tagno, furi karno garaashka, daar qaboojiyaha ...
Galaxy SmartTag ayaa suuqa soo gali doonta Janaayo 26 waxayna sameyn doontaa sidaas 34,90 euros Kaliya madow, ugu yaraan Spain, tan iyo dalal kale, sida Boqortooyada Ingiriiska, sidoo kale waxaa lagu heli karaa midab cad.
Haddii aad qorsheyneyso inaad cusbooneysiiso taleefankaagii hore ee casriga ahaa iyo ikhtiyaarka uu ku bixiyo midka cusub Samsung Galaxy S21 Ultra galaan miisaaniyaddaada, waa inaad ogaataa intaas waxaa sii dheer Galaxy Buds Pro, Samsung sidoo kale rU dhiib Galaxy SmartTag Haddii aad keydiso cutubkaaga ka hor intaanay boosteejooyinkani suuqa gaarin 28-kii January.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung meesha ay ku yaalliin waxaa lagu magacaabaa Galaxy SmartTag
Signal wuxuu gaarayaa 50 milyan oo soo dejin mahadsanidiisa WhatsApp
Cusboonaysiinta amniga Janaayo ee Galaxy S10 Lite hadda waa la heli karaa